(L) အင်တာနက်ကဆေးရွက်ကြီးလိုစွဲလမ်းမှုလား။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာသည်ဆေးစွဲရန်သို့မဟုတ်အမြန်အစားအစာကဲ့သို့စွဲလမ်းစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်ကိုရိုးသားကြပါစို့
iPad ကိုကလေးငယ်ကိုခေါ်သွားတာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘူးဆိုတာမိဘတွေသိမှာပါ။ ဓာတ်ပုံ - Dimitris Legakis / D Legakis Photography / Athena
ကျွန်မအင်တာနက်ကိုကြိုက်တယ်။ ငါကအများကြီးကိုအသုံးပြုပါ။ တကယ်တော့ငါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးတန်းအဆင့်မှာအလုပ်လုပ်နှင့်ဒီကနေအင်တာနက်ကိုမကြာမီမည်သည့်အချိန်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ fad တူအောင်မထားဘူး။
သန်းပေါင်းများစွာသောရာပေါင်းများစွာကို Facebook က Google အသုံးဝင်သည်နှင့် iPlayer မရှိမဖြစ်ကြောင်းကို, ပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလူတွေသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လျှင်ကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့ဖုန်းများများအတွက်ရောက်ရှိ Instagram ကို အသစ်တစ်ခုကိုပရိုဖိုင်းကို pic ကိုကြိုက်တယ်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ retweeted ခဲ့ကြပါလျှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
စာသားအရစွဲလမ်းစေတယ်၊ အီးမေးလ်အသစ်တစ်ခုတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုမူလုပ်ဆောင်မှုများကိုအားပေးသည့် dopamine high - hit တစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆုချသည်။ ရသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသင်ယူသည့်နည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ပြောသကဲ့သို့အင်တာနက်သည်“ ဖန်တီးသည်။“ ငါတို့လိုချင်တာကိုချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ dopamine သွေးဆောင်ကွင်းဆက်”"။
ကွန်ပျူတာဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများသည်ယင်းကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကသိထားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်ဗန်းစကားတွင်ထုတ်ကုန်များ၊ အက်ပ်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကို“ စေးကပ်” ဖြစ်စေသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းသိထားသည်မှာကြာပြီ - သူတို့၏ကီးဘုတ်များ၌ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်သေဆုံးနေသောဂိမ်းကစားသူများ၏ပုံပြင်များသည်ယခုအခါငါးနှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်သည်။crackberries“ သူတို့လိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ app ဟာသင့် ဦး နှောက်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအကြာမှာပျင်းရိနေပြီးသင်“ အခုဘာလုပ်ရမလဲ” လို့စဉ်းစားတဲ့အခါပထမဆုံးစိတ်ထဲပေါ်လာမှာပါ။
သို့သော်အဘယ်ကြောင့်အင်တာနက်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကတကယ်စွဲလမ်းဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးအဲဒီထုတ်ကုန်များအတွက်တာဝန်ယူရပါမည်ရှိမရှိကိုယ်နှိုက်ကိုမေးမြန်းသည်မဟုတ်လော ဒါကြောင့်တစ်ဦး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ညီမျှတည်ဆောက်ခြင်းရှိမရှိမမေးပါဘူး Skinner သေတ္တာ သို့မဟုတ်ဆွေးနွေးခြင်း အလိုဆန္ဒထုတ်လုပ်ဖို့ဘယ်လို သေချာပေါက်ကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်သနည်း
တနည်းအားဖြင့်ငါတို့ - အင်တာနက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာဆေးရွက်ကြီးအသစ်လား။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သာဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏မည်သည့်အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပါသနည်း။ ၎င်းသည် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များနှင့်တူညီသလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဆရာဝန်များသည်ကုလားအုတ်များကိုဆေးလိပ်သောက်” သည့်အဆင့်တွင်ရှိပါသလား။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်နီးပါးရှိပုံရသော်လည်းအောင်မြင်သောအက်ပလီကေးရှင်းသည်စွဲလမ်းစေသောအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးပေးသည်မှာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။တစ်ဦး intoxicant ပါဝင်ပါဘူးတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ“ အကယ်၍ မင်းကသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ချင်ရင်ဒါကိုပြproblemနာတစ်ခုလို့မမြင်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတင်းအကျပ်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ dopamine အဆင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု) ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာဂယက်ရိုက်မှုများကိုဆိုးရွားသည့်အရာအဖြစ်မသတ်မှတ်ပါ။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်၎င်းကိုပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်စတင်ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း) ဒါ့အပြင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ gamification အသားတင်အပြုသဘောအဖြစ်ကန့်သတ်ရန်တဲ့သဘောထားရှိပါတယ်။ ဥပမာ - X Prize ကိုတည်ထောင်သူ Peter Diamandis ကaပညာရေးကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်“ အစွမ်းထက်။ စွဲလမ်းစေသောဂိမ်း”.
သို့သော်ဤညင်သာပျော့ပျောင်းအနာဂတ်ကျနော်တို့ပြီးသားလျစ်လျူရှုဖြစ်ကြောင်းပြဿနာတစ်ခု၏ flipside ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က glamorised နှင့်ဖြစ်တည်မှုထဲကမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံပါပြီ။
စွဲလမ်းစေသောနည်းပညာများနှင့်ကလေးများကိုစဉ်းစားပါ။ မိဘများသည် iPad ကို ၂ နှစ်အရွယ်တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းသည်သင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားကြောင်းသိလိမ့်မည် သို့သော်လည်းထိုတုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မစိုးရိမ်ပါ။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ကဗီဒီယိုများနှင့် YouTube ပေါ်မှာသူတို့ကို post ။ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိကွန်ပျူတာကိုမိဘ၏သော့ခတ်ထားခြင်းသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာစိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ တချို့သူတွေအတွက်သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းမပါတဲ့ဘဝဟာမမြင်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြသည်။ အခြားသူများက Wi-Fi ပြိုကျလျှင် adrift ခံစားရသည်။ ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများခံစားနေရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မသက်သာသေးပါ။
တစ်နည်းပြောရရင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုတာပြaနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုအမြဲတော့မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ရောဂါလက္ခဏာတွေရဲ့“ လှပမှု” ကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်တဲ့အခါအကြောင်းရင်းကိုလျစ်လျူရှုမိပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များကိုအခြားစားသုံးသူများ၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်မတူပါ။ မည်သူမဆိုသူတို့၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ သို့မဟုတ် developer များအနေဖြင့်ခိုင်မာသောအားပေးမှုမပါဘဲအက်ပလီကေးရှင်းများကိုစွဲလမ်းမှုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအမေရိကန်၏ Stop Online Piracy အက်ဥပဒေနှင့်အခြားသူများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးနှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောဒစ်ဂျစ်တယ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏တရားဝင်မှုကို (သို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်) သူတို့၏မဆုတ်မနစ်အာရုံစိုက်မှုကြောင့်အံ့သြစရာကောင်းပုံရသည်မှာသူတို့၏ lobbyists များသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုနေသူများအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများလွဲချော်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်
အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်နှင့်အစာရှောင်အစားအစာကဲ့သို့စားသုံးသူများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းစားသုံးသည်ဟုသူတို့ကငြင်းခုန်နိုင်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းနေသောဓာတုပစ္စည်းများမှာဆိုးဝါးသည်ဟုသဘောတူကြသည်။ အစားအစာလည်း။ သကြားကအဆိပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်မဟုတ်? အတ္တလန္တိတ်မဂ္ဂဇင်းတွင်ဘီလ်ဒေးဗစ်owowကညီမျှသောအငြင်းအခုံပြုခြင်းသည်အင်တာနက်သည်အမြန်အစားအစာသစ်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ကို“ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်” ထားပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လုပ်မည်နည်းဟုသူကမေးသည်။ high-tar ဒီဂျစ်တယ်နှင့်နိမ့်ကတ္တရာဒစ်ဂျစ်တယ်ရှိပါသလား? developer များအပေါ်လူတန်းစားလုပ်ရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည်လား။
ဘေးဖယ်လျှို့ဝှက်ချက်အပြင်, ဒီဂရီကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏအမြောက်အများထွက်ရှိပါတယ်, ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဘဝတွေကိုပြောင်းလဲစီးပွားရေးတိုးတက်ကြီးထွားအောင်, ပညာရေးနှင့်ငါတို့ကို fit, ပျော်ရွှင်နှင့်ချိတ်ဆက်အောင်။ အိုင်ပက်သည်ရိုးရိုးစက်ကိရိယာတစ်ခုကဲ့သို့အင်တာနက်သည်စီးနင်းရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲအလယ်အလတ်သာဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းသည်မျှတပါသည်။ တ ဦး တည်း tool ကိုမှစွဲမရနိုင်ပါ။ (ထို့အပြင်ဆေးထိုးအပ်စွဲနှုန်းသည်မမြင့်မားပါ။ ဆီးချိုများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေသည့်အရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ )
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်မှာအန္တရာယ်ကင်းသော medium တစ်ခုသည်၎င်း၏“ အရာ” ဖြစ်သော၎င်း၏မှော်၊ နည်းလမ်း၊ အစီအစဉ်၊ ၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးသောအခါရလဒ်မကောင်းသောအစာကဲ့သို့ဆိုးရွားနိုင်သည်။ စူပါအစားအစာများရှိပြီး၊ ဒိုးနက်များလည်းရှိသည်။ မည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်ကြောင်းရိုးသားစွာပြောရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်၏ကလေးအားသူ၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုမည်သို့ခုနစ်မြှောက်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြရန်လိုသည်၊ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အမှားဖြစ်သည်။ ငါတို့သူ့ကိုနင့်ကိုချစ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ပြောစရာတောင်မလိုချင်ဘူး။